CEO Salesforce yazisa izicwangciso lwemveliso blockchain - Blockchain News
UTshazimpuzi 9, 2018 admin
Salesforce busebenza kwimveliso esekelwe kwi-technology blockchain, CEO yenkampani intanethi iye kutyhilwa.
Marc Benioff, ngubani wasungula inkampani 1999, wathi “ukuba mna ndicinga lukhulu malunga yintoni qhinga Salesforce ehlabathini blockchain, nokuba yintoni na izicwangciso Salesforce wajikeleza cryptocurrencies yaye indlela ezinxulumana ngayo zonke ezi zinto,” uthe.
Nangona zona iinkcukacha kwi kwimveliso oluzayo, Benioff wathi enethemba “babe blockchain kunye cryptocurrency isisombululo Salesforce nabo bonke abathengi bethu” ngaphambi Dreamforce – kwinkomfa le nkampani iya kusingatha eSan Francisco on Sept. 25.
Salesforce ke yeyona yaziwa ngokuba software ilifu computing yolawulo ubudlelwane umthengi. Le nkampani yenza $10.5 billion kwingeniso kunyaka ophela Jan. 31.
Joyina Salesforce USihlalo and CEO Marc Benioff kunye nentsebenziswano umsunguli Parker Harris ukuba yangaseMlilweni Chat on kwemini ngoLwesithathu. Zisa imibuzo yakho uze ufumane iimpendulo wazibonela ukusuka wabaseki salesforce.com
Yintoni esiyaziyo Cryptocurrency Igram and yocingo ICO
Post Previous:Mexico liphuhlisa inkqubo othi esekelwe blockchain
Post Next:Jamani No. 2 Izicwangciso stock exchange ukulungiselela ukuqaliswa kwe-Crypto Trading App
UCanzibe 28, 2018 e 1:52 PM